I-American Airlines kunye neJetBlue babhengeza iinqwelomoya ezintsha zeSanta Lucia ezisuka eDallas, eNewark naseNew York JFK
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Ukwaphula iindaba zeSanta Lucia » I-American Airlines kunye neJetBlue babhengeza iinqwelomoya ezintsha zeSanta Lucia ezisuka eDallas, eNewark naseNew York JFK
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukwaphula iindaba zeSanta Lucia • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukwaphula iindaba zase-US • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
I-American Airlines kunye ne-JetBlue Investment ezivela kwiindawo eziphambili zokuhamba zibonisa ukuzithemba ekubuyiseleni kwe-COVID-19
IGunya lezoKhenketho laseSanta Lucia libhiyozela ukubhengezwa kweenqwelomoya ezintsha zaseMelika kunye neJetBlue ezingamisiyo kwiHewanorra International Airport.
I-American Airlines iza kwazisa ngenqwelomoya entsha engafiki evela eDallas, eTexas, ukuqala ngoJuni 5, 2021
IJetBlue ibhengeze inqwelomoya entsha esuka eNewark, eNew Jersey (EWR) ukuqala ngoJulayi 1, 2021
Phantse unyaka emva kokuba ubhubhane we-Covid-19 uqalile, iSt.Lucia Tourism Authority (i-SLTA) ibhiyozela ukubhengezwa kwezinto ezintsha American Airlines kunye neJetBlue iindiza ezingapheliyo eziya eHewanorra International Airport (UVF) ezivela kwiindawo eziphambili zokuhamba e-US, ukuqala ngeli hlobo.
“Ihlobo lowama-2021 liza kuba lithuba elibalulekileyo kwezokhenketho, nanjengoko abathengi bebuyela kumava akhuselekileyo ohambo kwaye isiqithi sethu siqhubeka nokuhlala kunye ne-COVID,” utshilo uMphathiswa wezoKhenketho, oHloniphekileyo uDominic Fedee. “Ukuzithemba kokuba American Airlines kwaye JetBlue sibonisile ngokongeza iinqwelomoya ezintsha eSanta Lucia zisuka eDallas, eNew York naseNew Jersey zigxininisa ukuba imfuno yohambo iyakhula kwaye sinomdla wokubonelela ukuphumla okufunekayo kwiintsapho, kwizibini nakwabo bonke abahambi abafuna ikhefu. ”
“Abandwendweli eSanta Lucia kweli hlobo baya kwamkelwa ngezandla ezishushu ngabahlali bethu baseSanta Lucians abakulungeleyo kunye nemveliso yezokhenketho ehlaziyekileyo, ukuhlala ngokukhuselekileyo kwe-COVID kwiihotele nakwindawo zethu zokuhlala, kunye nethuba lokuntywila kwimicimbi yenkcubeko kunye nokuhlola indalo, ”uqhubeke njalo uMphathiswa uFedee.
I-American Airlines yazisa ngokusungulwa kwendiza esuka eDallas ukuya kwi-UVF
I-American Airlines ibhengeze ukuba izokwazisa ngenqwelomoya entsha engapheliyo eDallas, eTexas, ukuqala ngoJuni 5, 2021. Inkonzo yokuqala yeAmerican Airlines A321 izakusuka eDallas / Fort Worth International Airport (DFW) ngo-8: 40 ekuseni Ixesha (CST), ukufika kwi-UVF nge-3: 40 pm Ixesha leMpuma yeCaribbean (ECT). Inkonzo yokubuyisa izakusuka kwi-UVF ngeMigqibelo nge-2: 30 pm ECT kwaye ifike kwi-DFW nge-7: 22 pm CST. Inqwelomoya iya kuqhubeka ngo-Agasti 14, 2021 kwaye ibuye ngexesha lobusika lowama-2021/2022.
Ibango labakhenkethi kwindawo yaseTexas libonakalise lomelele kule minyaka imbalwa idlulileyo, njengoko uSanta Lucia ebesamkela iindwendwe ezivela kwimakethi yaseDallas nakwizixeko ezondlayo ngokudibanisa iinqwelomoya. Utyalo-mali lweAmerican Airlines lwenzile kule nqwelo moya intsha ye-DFW iza kubonelela ngamava okuhamba angabinamthungo kubakhenkethi abavela kulo mmandla nangaphaya.
I-JetBlue kunye ne-American Launch Flights ezivela eNew York / New Jersey Market
Indawo yase-New York ye-tri-state yindawo yentengiso ephezulu ye-Saint Lucia, kunye neendwendwe ezivela kwinqanaba elisempuma-mpuma njengenani lokuqala lokufika kwe-US. Iinqwelomoya ezimbini zongeze iinqwelomoya ezintsha kule ndawo ibalulekileyo:
I-American Airlines kutsha nje ibhengeze ukumiliselwa kwenkonzo entsha engamisiyo kwisikhululo seenqwelomoya iJohn F. Kennedy International Airport (JFK) eNew York. Inqwelomoya yeAA izakuqala ngoJuni 5, 2021, isuka ngo-8: 05 ekuseni ngokwexesha laseMpuma (EST) kwaye ifike kwi-UVF nge-12: 20 pm ECT. Inqwelo moya ebuyayo iza kushiya i-UVF nge-1: 20 pm ECT kwaye ifike kwi-JFK ngo-5: 43 pm ECT.
Kwindawo yaseNew York Tri-State, iJetBlue ibhengeze inqwelomoya entsha esuka eNewark, eNew Jersey (EWR) ukuqala ngoJulayi 1, 2021, isenza ukuba kube lula ukuba abahlali baseNew Jersey babhabhe baye ngqo eSaint Lucia. Inqwelomoya ihamba kathathu ngeveki ngooLwezibini, ngoLwesine nangoMgqibelo nge-8: 40 kusasa kwi-EST kwaye ifika kwi-UVF nge-1: 27 pm ECT. Inqwelo moya ebuyayo iza kushiya i-UVF nge-2: 55 pm ECT kwaye ifike e-EWR nge-7: 47 pm EST. Inkonzo yesininzi enikezelwa ngeMigqibelo ekhethekileyo. Oku kongeza kwiJetBlue esele ikho evela kwisikhululo seenqwelomoya saseNew York JFK.
Abathengi bonwabela ukhetho lweenqwelo moya kwiiDolophu ezininzi zaseMelika
Igunya lezoKhenketho iSanta Lucia lizinikele kwimizamo eqhubekayo yokubonelela ngokwanda kwenqwelomoya e-Melika eya eSaint Lucia. Okwangoku isuka e-US, I-American Airlines ibonelela ngokungami rhoqo eMiami (MIA), kunye nenkonzo yeveki nganye evela eCharlotte (CLT), eChicago (ORD) naseFiladelphia (PHL). I-Delta Airlines isebenza e-Atlanta (ATL) ngenkonzo ethe ngqo yemihla ngemihla. IJetBlue ibonelela ngeenqwelomoya kathathu ngeveki ukusuka eNew York (JFK) kwaye iphinda iqhubeke ngenqwelomoya mihla le ngo-Epreli. IJetBlue ikwanazo neenqwelo moya zeveki nganye ezivela eBoston (BOS).
Ukusukela oko iinqwelomoya zokuqala zabuyela eSanta Lucia ngoJulayi 2020, ilizwe liphumeze iinkqubo ezihambelana noxanduva lweCovid-19, ukubonelela ngokhuseleko olwandayo kubakhenkethi nakubemi bengingqi. IGunya lezoKhenketho laseSanta Lucia kunye noMbutho woBhedlele wezoLimo kunye nezoKhenketho eSanta Lucia, kunye noMphathiswa Wezempilo kunye noMphathiswa Wezokhenketho, bayaqhubeka nokusebenza kwikonsathi yokubonelela ngeempendulo ezikhawulezayo kuphuhliso lweCovid-19.
Kutshanje e-US, UK, iingcebiso ze-EU kubukumkani base-Eswatini ...